Sanatar Xuseen: Shacabka ka ra’yiga duwan argagixiso ayaa adeegsatay – Kalfadhi
Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud: Shacabka dareenkooda muujinaya, ee iyaga ka ra’yiga duwan, waxay yiraahdaan ARGAGIXISO IYO QARAN DUMIS ayaa soo adeegsatay. Markay dhaawacmaan oo ay dhintaana looma gurmado.
Shacabka ayaga ku ra’yiga ah waxay yiraahdaan waa WADANIIN Dowladnimada Hormuud u ah. Siyaasiinta Ka ra’yiga duwan waxay ugu yeeraan QARAN DUMIS IYO DIB U SOCOD. Kuwa ayaga ku ra’yiga ahna waa MUWAADINIIN Dowladmimada Difaacaya oo dalka ka naxaya.
Mar haddii aad u dulqaadan weydo kuwa kaa ra’yiga duwan, waxaad ku socotaa wadadii HAL RA’YI lagu maamulay wadan (Kali-Talismimo).
XOREEY ARAGTIDA SHACABKA.